ဖောက်​ပြန်​ဖို့​သေချာသ​လောက်​ရှိတဲ့ ​မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံစံ ( ၅ ) မျိုး… - CeleLove
June 5, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်အချစ် 0
ဒီလိုမိန်းက​လေးမျိုး​က ပစ္စည်းဥစ္စာအ​ပေါ်အရမ်းတန်​ဖိုးထားတဲ့သူ​တွေ​ပေါ့။ သူမဟာ ဟိုဟာဝယ်​ဖို့၊ ဒီဟာဝယ်​​ပေးဖို့ အမြဲသင့်​ကိုပူဆာ​နေမှာပါ။ သင်​ဝယ်​​ပေးဖို့ငြင်းလိုက်​ရင်​လည်း သင်​သူ့ကိုမချစ်​ဘူးလို့ သူမထင်​မှာပါ။ သင်​ဝယ်​​ပေးနိုင်​တုန်း​တော့ သင့်​ကိုချစ်​နိုင်​​ပေမယ့်​ သင်​မဝယ်​​ပေးနိုင်​​တော့တဲ့တစ်​​နေ့မှာ တခြားအ​ကောင်​ကြီးကြီးတစ်​​ယောက်​ကို သူမအချစ်​​တွေသိမ်းကျုံး​ပေးလိုက်​မယ့်​မိန်းမမျိုး​ပေါ့။
(၂) သူများခံစားချက်​က်ို က​စားတတ်​သူ။
အထိအ​တွေ့​တွေကိုသာယာလို့ဖြစ်​​စေ၊ ​ယောက်ျား​​လေး​တွေကို ကစားချင်​လို့ဖြစ်​​စေ ၊ အတည်​တကျတွဲရမယ့်​သူမ​​တွေ့​သေး​လို့ဖြစ်​​စေ ရည်းစားအ​ပျော်​ထားတတ်​တဲ့သူမဟာလည်း သင့်​ကိုပစ်​သွားမယ့်​မိန်းက​လေးအမျိုးအစားပါ။
သူမဟာ ရင်းနှီးတဲ့​ယောက်ျား​လေးသူငယ်​ချင်း​တွေများလွန်းလို့ သင်​သဝန်​တိုရမယ့်​ ​ကောင်​မ​လေးမျိုး​ပေါ့ …. ။ တခါတ​လေကျ​တော့လည်း သူနဲ့ သူ့​ယောက်ျား​လေးသူငယ်​ချင်း​တွေကို အတွဲလို့ ပတ်​ဝန်းကျင်​ကထင်တာခံရပြန်​တယ်​​လေ။ သင့်​​ကောင်​မ​လေးက ​ရင်းနှီးတဲ့​ယောက်ျား​လေးသူငယ်​ချင်းထားတာမမှား​ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ အရမ်းရင်​ခုန်​စရာ​ကောင်းတဲ့အချစ်​ဇတ်​လမ်း​တွေက သူငယ်​ချင်းချစ်​သူဇာတ်​လမ်း​တွေပါ။ ဝိုင်​​လေးနည်းနည်းမူးလာပြီး သူတို့တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​အရမ်းကိုချစ်​​နေပြီလို့ နားလည်​လိုက်​ချိန်​မှာ သင်​ဟာ​နောက်​​ကောက်​ကျန်​ခဲ့ရ​တော့မှာ။
သူဟာ သင့်​ဆီက ငါမင်းကိုချစ်​လိုက်​တာ၊လွမ်းလိုက်​တာ၊ နင်​ကဒီလိုလှတာ၊ဟိုလိုလှတာ၊ အရမ်းချစ်​ဖို့​ကောင်းတာဆိုပြီး​ပြောသံမျိုးကို တစ်​ရက်​အကြ်ိမ်​ ၁၀၀ ​​လောက်​ကြားချင်​သူကြီး​ပေါ့။ သင်​အလုပ်​​တွေရှုတ်​​နေလို့ သူ့ကိုခဏ​လောက်​​လေးပြစ်​ထားခဲ့မယ်​ဆိုရင်​​တောင်​ သူမ​ကျေနပ်​ပဲ တခြားဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဆီ​ချက်​ချင်းသွားလိုက်​မှာပါ။
(၅) Party Girl
ဒီလို​ကောင်​မ​လေးဟာ သင့်​ချစ်​သူဆိုရင်​ ဖြစ်​နိုင်​​ချေက သင်​တို့နှစ်​​ယောက်​ ပါတီမှာ​သောက်​ရင်းစားရင်း ရည်းစားဖြစ်​ခဲ့ကြတာပါ။ သူ့ကိုပါတီမသွားဖို့လည်း သင်​ထိန်းနိုင်​မှာမဟုတ်​ပါဘူး။ သင်​တို့နှစ်​​ယောက်​ ကရင်းခုန်​ရင်းရည်းစားဖြစ်​ခဲ့သလိုပဲ သူမတခြား​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ရည်းစားဖြစ်​ဖို့ အရမ်းကိုလွယ်​ကူလွန်းပါတယ်​။
​ဖောကျ​ပွနျ​ဖို့​သခြောသ​လောကျ​ရှိတဲ့ ​မိနျးကလေးတှရေဲ့ပုံစံ ( ၅ ) မြိုး…
ဒီလိုမိနျးက​လေးမြိုး​က ပစ်စညျးဥစ်စာအ​ပျေါအရမျးတနျ​ဖိုးထားတဲ့သူ​တှေ​ပေါ့။ သူမဟာ ဟိုဟာဝယျ​ဖို့၊ ဒီဟာဝယျ​​ပေးဖို့ အမွဲသငျ့​ကိုပူဆာ​နမှောပါ။ သငျ​ဝယျ​​ပေးဖို့ငွငျးလိုကျ​ရငျ​လညျး သငျ​သူ့ကိုမခဈြ​ဘူးလို့ သူမထငျ​မှာပါ။ သငျ​ဝယျ​​ပေးနိုငျ​တုနျး​တော့ သငျ့​ကိုခဈြ​နိုငျ​​ပမေယျ့​ သငျ​မဝယျ​​ပေးနိုငျ​​တော့တဲ့တဈ​​နမှေ့ာ တခွားအ​ကောငျ​ကွီးကွီးတဈ​​ယောကျ​ကို သူမအခဈြ​​တှသေိမျးကြုံး​ပေးလိုကျ​မယျ့​မိနျးမမြိုး​ပေါ့။
(၂) သူမြားခံစားခကျြ​ကျို က​စားတတျ​သူ။
အထိအ​တှေ့​တှကေိုသာယာလို့ဖွဈ​​စေ၊ ​ယောကျြား​​လေး​တှကေို ကစားခငျြ​လို့ဖွဈ​​စေ ၊ အတညျ​တကတြှဲရမယျ့​သူမ​​တှေ့​သေး​လို့ဖွဈ​​စေ ရညျးစားအ​ပြျော​ထားတတျ​တဲ့သူမဟာလညျး သငျ့​ကိုပဈ​သှားမယျ့​မိနျးက​လေးအမြိုးအစားပါ။
သူမဟာ ရငျးနှီးတဲ့​ယောကျြား​လေးသူငယျ​ခငျြး​တှမြေားလှနျးလို့ သငျ​သဝနျ​တိုရမယျ့​ ​ကောငျ​မ​လေးမြိုး​ပေါ့ …. ။ တခါတ​လကြေ​တော့လညျး သူနဲ့ သူ့​ယောကျြား​လေးသူငယျ​ခငျြး​တှကေို အတှဲလို့ ပတျ​ဝနျးကငျြ​ကထငျတာခံရပွနျ​တယျ​​လေ။ သငျ့​​ကောငျ​မ​လေးက ​ရငျးနှီးတဲ့​ယောကျြား​လေးသူငယျ​ခငျြးထားတာမမှား​ပါဘူး။ ဒါ​ပမေယျ့​ အရမျးရငျ​ခုနျ​စရာ​ကောငျးတဲ့အခဈြ​ဇတျ​လမျး​တှကေ သူငယျ​ခငျြးခဈြ​သူဇာတျ​လမျး​တှပေါ။ ဝိုငျ​​လေးနညျးနညျးမူးလာပွီး သူတို့တဈ​​ယောကျ​နဲ့တဈ​​ယောကျ​အရမျးကိုခဈြ​​နပွေီလို့ နားလညျ​လိုကျ​ခြိနျ​မှာ သငျ​ဟာ​နောကျ​​ကောကျ​ကနျြ​ခဲ့ရ​တော့မှာ။
သူဟာ သငျ့​ဆီက ငါမငျးကိုခဈြ​လိုကျ​တာ၊လှမျးလိုကျ​တာ၊ နငျ​ကဒီလိုလှတာ၊ဟိုလိုလှတာ၊ အရမျးခဈြ​ဖို့​ကောငျးတာဆိုပွီး​ပွောသံမြိုးကို တဈ​ရကျ​အကျွိမျ​ ၁၀၀ ​​လောကျ​ကွားခငျြ​သူကွီး​ပေါ့။ သငျ​အလုပျ​​တှရှေုတျ​​နလေို့ သူ့ကိုခဏ​လောကျ​​လေးပွဈ​ထားခဲ့မယျ​ဆိုရငျ​​တောငျ​ သူမ​ကနြေပျ​ပဲ တခွားဂရုစိုကျ​တတျ​တဲ့​ကောငျ​​လေးတဈ​​ယောကျ​ဆီ​ခကျြ​ခငျြးသှားလိုကျ​မှာပါ။
ဒီလို​ကောငျ​မ​လေးဟာ သငျ့​ခဈြ​သူဆိုရငျ​ ဖွဈ​နိုငျ​​ခကြေ သငျ​တို့နှဈ​​ယောကျ​ ပါတီမှာ​သောကျ​ရငျးစားရငျး ရညျးစားဖွဈ​ခဲ့ကွတာပါ။ သူ့ကိုပါတီမသှားဖို့လညျး သငျ​ထိနျးနိုငျ​မှာမဟုတျ​ပါဘူး။ သငျ​တို့နှဈ​​ယောကျ​ ကရငျးခုနျ​ရငျးရညျးစားဖွဈ​ခဲ့သလိုပဲ သူမတခွား​ကောငျ​​လေးတဈ​​ယောကျ​နဲ့ရညျးစားဖွဈ​ဖို့ အရမျးကိုလှယျ​ကူလှနျးပါတယျ​။